Boarding school - kuthiwa ezikoleni ezikhethekile izingane azifinyelelanga yobudala, zinethuba ukuhlala emhlabeni abafundi iwashi. Ukudala izikhungo zemfundo ezifana ngenjongo imikhaya inhlalakahle ekufundiseni isizukulwane esisha futhi ukwandisa ezingeni zokuvikeleka komphakathi kwezingane kanye nokuthuthukiswa ngamakhono abo.
Ezweni lethu, kukhona lezi zinhlobo ezilandelayo izikole boarding: njalo, esikhathini esingamahora anga-, boarding-esikoleni, izikole boarding, lyceums. Ziyahlukahluka kuye hhayi izinhlelo kuphela yokufundisa eyala, kodwa futhi waqoqa akuxhomekile abafundi abadinga ukunakekelwa wombuso. Liphinde kungenziwa izingane abaqeqeshiwe ezivela emindenini abavamile endaweni eningeke secondary school ohlala kulo.
Boarding kwesigaba Jwayelekile unikeza abafundi zonke ngokwazi ukuthi sithole ezikoleni esigcwele. Okungukuthi, abafundi ukudlula wonke amazinga amathathu imfundo: lokuqala, lesibili kanye engenhla yesibili. Kulesi sikole boarding ngokuvamile ukubeka izingane ngaphandle abazali, nganoma isiphi isizathu, noma izingane kusukela imikhaya zikhathazeke.
Boarding school nezikhonzi wadala izingane unesiphiwo ingqondo creative nesayensi. Ngokwesibonelo, kukhona ngokomzimba futhi zezibalo izikole boarding lapho izingane ziya ngokuya Kubanqobi imincintiswano ehlukahlukene. isisekelo Competitive ukuthola izikole ezinjalo akuvumela ukuba uthayiphe isikole boarding izingane amakhono ezikhethekile.
Futhi, ezweni lakithi kukhona izikole boarding ekhethekile sezingane ezikhubazekile nokuthuthukiswa elinganiselwe. Kuyinto, isibonelo, imfundo ekhethekile ka ongaboni kahle, ongezwa kahle, nokunye. D. Uhlelo lokhu semfundo kudalwa ngesisekelo izinqubo ezithile eklanyelwe ukuqinisekisa ukuthi ingane ekhubazekile ithole indawo yayo emphakathini, naphezu kokuthi naye uyagula, ngake ngangazizwa inyumbazane .
A indima ekhethekile ekufundiseni isizukulwane esisha play izinhlobo ezikoleni boarding izingane ungakabi okuthiwa engozini. indima yabo eyinhloko ukuvikela intsha emathonyeni ayingozi kwezemvelo kanye uyobanika ephahlwe umntwana beya ukuze usinde ngokwengqondo hhayi izenzo zobugebengu.
Boarding - yezefundo ikhokhwe. Imali likhokhelwa kubazali noma abantu esikhundleni kubo. Ngaphezu kokufundisa izingane zinikezwa izingubo ezifanele, izincwadi kanye nezinye izesekeli ezidingekayo. On ngezimpelasonto namaholidi, ngesicelo abafundi omdala ekhaya.
Abathweswa iziqu ezikoleni boarding, lapho izingane eziyizintandane ngempela bathole umsebenzi.
Indawo ekhethekile phakathi izikhungo zemfundo kanye ayimi ukuhlala kuthatha ubusosha boarding school. I akuxhomekile main, isikhulu sezempi ukuba isikole - izingane kusukela emindenini lephuyile, izintandane izigceme. Uhlelo lesikhungo yohlobo eyenzelwe abafana ngenxa yezizathu zempilo bazimisele ukuba ahambe evamile izifundo isiyalo isiqondiso lempi. Ubusosha Boarding ingqalasizinda Kuthi ezahlukene kusukela evamile. kumelwe nakanjani kube phansi, ezemidlalo ndawo, iziza okungenani ezimbili paramilitary nge Yiqiniso isithiyo, kanye izindawo ngokwehlukana nakhelwe nokubekwa nezempi, uhla sokudubula futhi avtoklass.
Ubusosha boarding school inikeza futhi ezengeziwe imfundo yobuhle. Abafundi babe nethuba lokufunda nobuciko bokusina, ukuhlanganyela studio yaseshashalazini, ukudlala umculo, udwebe. Kodwa yagxila kulesakhiwo lolu hlobo kuyinto imfundo kwezempi-yokushisekela izwe, elihlobene ne kumiswa ubuntu, ezoqhubeka akulungele zikhathi zonke ukuvikela ezweni.
Ukuqeqeshwa Modular njengendlela yokuthola lube lwenta ncono lizinga kumiswa ayekuthola imfundo yesibili ephakeme
Indlela yokwenza indawo epholile
Ukuhlukanisa ngo-zero: kungani kungenjalo?
Ukuvikelwa Social njengoba isimo ukulondeka Ingane School
Jaan e Mann isikhathi - inkomba ukhiye the zimali
Acute esingamahlalakhona semithambo: izimbangela, izimpawu kanye nemithetho zokuqala zosizo
Marina Holiday Club 4 * (Bulgaria, Pomorie): ingqalasizinda ehhotela, incazelo amakamelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Inxanxathela Vitamin ukulungiselela "Aevit": Kungani ukusetshenziswa
Acute otitis abezindaba ezinganeni: yini ukuba aphathe?
Lefortovo Umhubhe: Amaqiniso kanye Izinganekwane
Cherry juice ekhaya: zokupheka
Black umkhawulo ( "Skyrim"). Ngabe waya kuphi futhi kungani siyidinga?